ब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि सुजनाले घरमै बसेर घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी वजन! – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > ब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि सुजनाले घरमै बसेर घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी वजन!
ब्वाइफ्रेन्डले मोटी भनेर छोडेपछि सुजनाले घरमै बसेर घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी वजन!
admin July 31, 2020 July 31, 2020 जीवनशैली, समाज	0
तनहुँ, विमलनगरकी सुजना श्रेष्ठ स्टन्ट राइडर हुन्। सन् २०१५ मा ‘मिस तनहुँ’ बनेकी उनको वजन केही महिना अगाडिसम्म १ सय १ केजी थियो। अहिले आफ्नो वजन घटाएर उनले ६५ केजीमा झारेकी छिन्। उनी बस्ने ठाउँमा जिमको सुविधा छैन। उनले घरमै छ महिनामा ३६ किलो वजन घटाएकी हुन्। सानोमा म एकदमै दुब्लो थिएँ। कक्षा ११ मा हुँदा सवारी दुर्घटनामा परेँ। बेड रेस्ट गर्नुप¥यो। खानपानमा कन्ट्रोल भएन। घरमै रेस्टुरेन्ट थियो।
मीठो–मीठो खानेकुरा पाक्थ्यो। जे पनि खाइदिन्थेँ। रेस्टुरेन्टमा मीठोमसिनो पाक्दा मन थाम्नै सक्दिनथेँ। खाने काम मात्रै भयो, एक्सरसाइज केही भएन। खानपान र अल्छीपनले मोटाउँदै गएँ। सबैले मलाई मोटी भन्न थाले। छरछिमेकले ‘छोरी धेरै मोटाई, दुब्लाउन लगाउनु न’ भन्दै आमाबुबालाई सल्लाह दिन्थे।
घरमै घटाएँ वजन
रोडिजको यात्रा सकिनेबित्तिकै वर्कआउट सुरु गर्ने निधो गरेँ। मेरो एरियामा जिमखाना थिएन। घरमा इन्टरनेट थियो। घरमै एक्सरसाइज गरेर तौल घटाउने योजना बनाएँ। वजन घटाएका विदेशीहरूको ट्रान्सफर्मेसन भिडियो युट्युबमा हेर्न थालेँ। त्यो हेरेपछि केही आँट आयो। गर्न सक्छु भन्ने लाग्यो। मैले आफ्नो शतप्रतिशत दिएँ। युट्युबमा धेरै रिसर्च गर्न थालेँ। के खान हुन्छ, के हुँदैनदेखि शरीरको कुन अंगका लागि कस्तो खालको एक्सरसाइज सबै भेला पारेँ।
कोल्ड ड्रिंक्सको सोखिन थिएँ। तर, त्यसमा चिनीको मात्रा एकदमै धेरै हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि कोक खान छाडेँ। प्रशस्त पानी खान थालेँ। भात छाडेर रोटी खान थालेँ। बिहानै ओछ्यान छाडेर डाँडापाखामा दगुर्न थालेँ। अभ्यास गर्दा चिनी पूरै बन्द गरेँ। चिल्लो, पिरो खानेकुरा खाँदै खाइनँ। चार महिनासम्म हप्ताको एक दिन मात्र भात खाएँ। भोकै चाहिँ बसिनँ। जंक फुड खान छाडेँ। खान मन लागे ‘खानेकुरा खाएर के नै हुन्छ र रु मुखको मीठो त हो’ भनेर चित्त बुझाउँथेँ।
भावना बिद्राेहीकाे आक्रोशः पुण्य गाैतम भारतीय दलाल हो (भिडियो हेर्नुस्)
मार्क्स फर्किएः अँ म रेकै हुँ, तर म जिउँदै पनि छु । यो द्वन्द्ववाद हो
कस्तो पापी काल! सिए पढ्दै गरेकि २२ बर्षिया सितालार्इ यसरी चुँडेर लगेपछि…